विवाह गर्न लेखेको हुनुपर्छ कि देखेको ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः मंसिर ८, २०७६ - साप्ताहिक
विवाह गर्न लेखेको हुनुपर्छ कि देखेको ?
लेखेको, देखेको होइन । समयले छेकेको हुनुपर्छ है ।
विल्सनविक्रम राई, कलाकार
लेखेको हुनुपर्छ, देखेकाले पाइँदैन ।
अष्ट महर्जन, द्वन्द्व निर्देशक
विवाह भनेको जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण यात्रा हो । त्यसैले देखेको हुनु जरुरी हुन्छ, तर लेखेको कुरालाई पनि नकार्न असम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
अनिता लिम्बू, मोडल
लेख्न पनि पर्दैन, देख्न पनि पर्दैन । अर्काले उम्काउनु अघि आँट्न सक्नुपर्छ कि त आफ्नो हैसियत ढाँट्न सक्नुपर्छ ।
अविरल थापा, निर्माता
यो मामिलामा त लेखेकै हुनुपर्छ । आँखाले देखेको सबै कहाँ आफ्नो हुन्छ र ? जे भाग्यमा लेखेको छ त्यही हुन्छ ।
एलिस कार्की, संगीतकार
जीवनमा देखेको कुरा त प्राय: कमै हुन्छ । पक्कै पनि भाग्यमा लेखेको कुरा नै हुने हो । त्यसमाथि पनि बिहे भन्ने कुरा त झन जीवनकै महत्त्वपूर्ण कुरा भएकाले बिहे देखेको भन्दा पनि लेखेको हुन्छ । देखेको कुरा एकछिनका लागि हुन्छ भने लेखेको कुरा जीवनभरका लागि । त्यसैले म जीवनमा देखेको कुरा भन्दा पनि लेखेको कुरा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु ।
विकास लामिछाने, मोडल
लेखेको हुनुपर्छ नि । देख्दैमा कहाँ विवाह गर्न पाइन्छ ? देख्दै विवाह गर्न खोजे त मिटु लगाइन्छ ।
अमृत मरहठ्ठा, मेकअप आर्टिष्ट
जन्म, मृत्यु तथा विवाह लेखेको नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कथन छ, तर मेरो विचारमा विवाह गर्न लेखेको, देखेको भन्दा पनि मन मिल्ने, कुरा बुझ्ने, साथ दिने, माया गर्ने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
सूर्य चन्द, सञ्चारकर्मी
यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छु म पनि ।
यो मामिलामा त दुवै हुनुपर्छ ।
बालिका थपलिया, कवयित्री
लेखेकै हुनुपर्छ । तथापि आजभोलि केही केही देखेको पनि हुनुपर्छ ।
वसन्त थाम्सुहाङ, गीतकार
विवाह गर्नका लागि लेखेको हुनुपर्छ ।
विजय लामा, गायक
लेख्या र देख्या दुवै हुनुपर्छ । देखेकाहरूको छुटेको पनि देखेको छु । विवाह नभएकै देखेको छु । लेख्याहरूको चिना नै मिले पनि बिहेको टुंगो नलागेको पनि देखेको छु । किनभने उनीहरू एक–अर्कालाई मन पराउँदैनन् । त्यही भए लेख्या र देख्या दुवै हुनुपर्छ ।
अर्पणा मगर, सञ्चारकर्मी
आजकाल लेखेको पनि हुनु पर्दैन, देखेको पनि हुनु पर्दैन । कुरो मिल्यो फ्याट्ट भयो, मिलेन भएन । आज बिहे गर्‍यो भोलि डिभोर्स हुने, समाजमा लेख्या भन्ने नै हुन्न ।
जिन्दगीको रंगमञ्चमा देख्न त कति देखिन्छ–देखिन्छ, तर त्यो सब दृष्टिभ्रमजस्तै हो । आखिर हेर्दै हेर्दै जाँदा एउटा विन्दुमा ठोकिन्छ, जहाँ लेखेको हुन्छ ।
डीआर राई, लेखक
देखेको हुनुपर्छ । जब देखिन्छ, आत्मीयता बढ्छ, नजिक हुन्छ । लेखेको त कसलाई के थाहा, के लेखेको हुन्छ भन्ने ?
आमिर गौतम, अभिनेता
पहिले–पहिले त यो भनाइ सार्थक नै लाग्थ्यो, तर आजभोलि लेखेकाले मात्र पनि नभैरा’को अवस्था छ । पहिलो कुरा त विवाह भनेको एक–अर्कासँग दु:खसुख साटेर जीवन बिताउनेजस्तो महत्वपूर्ण सम्झौता हो । कसैलाई नहेरी, नदेखिकनै भाग्यमा छ भनेर गरेको सम्झौता टुट्न पनि सक्छ । त्यसैले मेरो व्यक्तिगत विचारमा विवाह गर्नका लागि थोरै देखेको र धेरै लेखेको हुनुपर्छ ।
दुवै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ ।
धर्मेन्द्र झा, पत्रकार
देखेको, भेटेको, जानेको भए पो कुरा अगाडि बढ्ला नि † लेखेको हुन्छ भनेर आस गरेर बस्यो भने त जवानीले नै सराप्ला नि फेरि ।
देवल भण्डारी, गीतकार
शतप्रतिशत लेखेको हुनुपर्छ । नत्र देखेको हुने भए मलाई करिश्मा मानन्धर मन पर्छ नि ।
दृश्य सुवेदी, मोडल
देखेर, लेखेर भन्दा पनि आफ्नो जीवन चल्ने जीवनसाथी विवाह गर्नुपर्छ ।
मञ्जरी गैरे पराजुली, सञ्चारकर्मी
विवाह गर्न देखेको वा लेखेको हुनु हुँदैन । देखेपछि आफैंले लेख्ने हुनुपर्छ र मेहनत गरे हुन्छ पनि ।
दीपेन्द्र लामा, निर्देशक
लेखेको हुनुपर्दो रहेछ । देख्नु त कति देखियो देखियो नि ।
भीम लिम्बू, गायक
विवाह गर्न देखेर हुन्न । भगवान्ले जोडी बनाएर लेखेकै हुनुपर्छ ।
भाग्यमा विश्वास गर्छु । नदेखी विवाह कसरी हुनु ? त्यसैले विवाह हुन देखेको चाहिँ लेखिएकै हुनुपर्छ ।
आर्यन अधिकारी, अभिनेता
विवाह गर्न पहिला केटाकेटीले एक–अर्कालाई देखेको हुनुपर्छ । अनि विवाह गर्न फाइनल भएपछि निमन्त्रणा कार्ड, शुभ विवाहको ब्यानरमा पनि लेखेको हुनुपर्छ । यसकारण विवाह गर्न पहिला देखेको अनि पछि लेखेको हुनुपर्छ ।
दीपक आचार्य, अभिनेता
मेरो विचारमा विवाह भनेको देखेको भन्दा लेखेको नै हुनुपर्छ ।
विपिन आचार्य, संगीतकार
देखेर विवाह हुन्छ । देखेर चाहिँ डिभोर्स हो ।
विदुर गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेस एसोसिएसन
विवाह देखेर हैन, लेखेर नै ल्याउनुपर्दो रहेछ ।
हर्षिका श्रेष्ठ, अभिनेत्री
लेखेको । विवाहका लागि जुर्नुपर्छ ।
वसन्त वित्यासी थापा, गीतकार
सबैले जन्म, मृत्यु र विवाह लेखेरै ल्याएको हुन्छ भन्छन् । देखेको कुरा पाइँदैन, लेखेको कुरा पाइन्छ भन्ने उखान पनि छ । त्यसैले मलाई पनि विवाह लेखेरै ल्याएको हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
लेखेको । देख्न त कति देखिन्छ, देखिन्छ ।
लेखेकै हुनुपर्छ ।
अनुप के बराल, व्यवसायी
प्रकाशित :मंसिर ८, २०७६
शैलीमा विवाहको प्रस्ताव
पापाराजीले नदेखेको प्रेमकथा
तपाईंका केहि बानी, जसले गर्न सक्छ मृगौलालाई हानी
कति वर्षमा विवाह गर्ने ?